बिनाकारण पत्रकार प्रहरी हिरासतमा | PARDAFAS
काम सकाएर डेरामा फर्कदै गरेका एक पत्रकारलाई बिहीबार विना कारण नियन्त्रणमा लिएको छ ।
नयाँ पत्रिका दैनिकमा कार्यरत्र पत्रकार टेकराज थामीलाई बिहीबार तीनकुने स्थित प्रहरी कार्यालय नजिकै सडकमा चेकिङमा बसेको प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो । तीन घण्टा नियन्त्रणमा लिएर छाडेको थामीले बताए । घटना विवरण उनकै शब्दमा:
बिहीबार करिब साढे ८ बजे कार्यालयबाट मोटर साइकलमा कोठा आउँदै थिएँ । तीनकुनेमा सदा झै चेकिङ रहेछ । मोटर साइकल रोक भन्यो । मैले रोकेँ । लाइसेन्स ब्लुबुक झिक भन्यो । मैले झिकेर दिएँ । मापसे गरेको छ की छैन भन्यो । छैन भने । यसको झोलादेखि जुत्तासम्म चेक गर भन्यो । सँगैको हवल्दारले चेकिङ गर्यो । प्रहरीले अपराधिलाई जस्तो व्यवहार गरेपछि मैले सोधेँ-‘सर लाइसेन्स ब्लुबुक चेक गर्ने काम त ट्राफिक प्रहरीको होइर र ?’ मैले यति के भनेको थिएँ । उसले ‘बढ्ता बोल्छस्’ भन्यो । ‘होइन मैले सोधेको मात्रै हो । मेरो लाइसेन्स ब्लुबुक दिनुस न’ मैले भनेँ । ‘….यो बढ्ता बोल्दो रहेछ । यसलाई थुन्दे’ उसले आदेश दियो । मलाई महानगरीय प्रहरी वृत्त बानेश्वर लगियो । एक छिनपछि डिएसपी भिम ढकाल हल्लिदै आए । ‘यसलाई एक घण्टा थुन्दे अनि मान्छे बोलाएर जिम्मा लगाइदे ।’ यसो भनिरहँदा डिएसपीको मुखबाट आएको रक्सिको गन्धले यति कडा थियो की मुखै थुन्नु पर्ने स्थिति थियो । डिएसपी रक्सिको नशामा चुर रहेको यसैबाट पुष्टि हुन्थ्यो । अव मेरो तीन पुस्ते सोधपुछ भयो । हिरासतमा रहेको अर्का अभियुक्तलाई उठाइयो । उसलाई हतकडि लगाइयो । मेरो हातमा पनि हत्कडि लगाइयो । तेरो स्वस्थ्य परिक्षण गर्नु छ, अस्पताल हिँड भन्यो । हत्कडिसँगै कान्तिपुर अस्पताल लगियो । काउन्टरमा बिल भर्न लगायो । भित्र लगियो । केही नगरि फेरी हिरासत कक्षमा ल्याइयो । अन्त्यमा त्यतिकै छाडियो ।
यति बेला मेरो मन प्रश्नै-प्रश्नले भरिएको छ । प्रहरीले मलाई किन पक्राउ गर्यो ? मैले अपराध नै गरेको हो भने किन छाड्यो ? ट्राफिक नियम उल्लंघन गरे कारवाही गर्ने अधिकार ट्राफिक पुलिसको हो, तर मेरो लाइसेन्स ब्लुबुक अरुले नै लिएका थिए । उसको गलत काममा प्रश्न गर्नु मेरो अपराध हो ? मेरो मोटरसाइकल नियन्त्रणमा के कारणले लिइयो र पछि किन छाडियो ? बिनाकारण हिरासतमा लिइ हत्कडी लगाउनु र मानसिक याताना दिनु यही हो, प्रहरीको अधिकार ?
बृतका प्रमुख डीएसपी भीम ढकालले भने थामीलाई दुर्व्यवहार नगरेको दाबी गरे । ‘हामीले नियन्त्रणमा लिएपछि जो कोहीलाई पनि मेडिकल चेक गर्न अस्पताल पठाउँछौ,’ उनले भने, ‘तर, उहाँलाई नियन्त्रणमा लिएर अरु थुनुवा जस्तै राखेको छैन । डिउटी अफिसरको कोठामा राखेको हो ।’ नियन्त्रणमा लिएको धेरैपछि मात्रै उनी पत्रकार भएको आफूले थाहा पाएको उनले बताए । थामीको आफन्तलाई बोलाएर जिम्मा लगाउँदा ढिलाई भएको उनले स्वीकार गरे ।